जातजाति विभेदीकरणको सजाय के ?
माथिल्लो भनिँदो जातले त्योभन्दा तल्लो भनिँदो जातलाई होच्याउने, थेच्याउने, विभेद गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन नेपालको कानुनविपरीत छ ।
नेपाल एक यस्तो मुलुक हो जहाँ विभिन्न जातजाति बसोबास गर्ने मुलुक हो । यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिको रहनसहन, आनीबानी र रीतिथिति पनि फरक–फरक रहेको छ । माथिल्लो भनिँदो जातले त्योभन्दा तल्लो भनिँदो जातलाई होच्याउने, थेच्याउने, विभेद गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन नेपालको कानुनविपरीत छ । यसरी भेदभाव गर्दा हुने कानुनी कारबाही के होला ?
आजको युगमा दलित, बाहुन, क्षेत्री भनिरहँदा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीकृत भयो र मनमा खुलदुली भइरह्यो । कुरा हाम्रो परिवारिक सन्दर्भ केन्द्रित रहेको छ, तर यो सिङ्गो नेपाली परिवारगत समस्या उठाउन खोजिएको छ कि जब छोराले नेपाली समाजको भाषामा अन्तर्जातीय विवाह ग¥यो र विभेदको सुरुवात ग¥यो । त्यो बुहारी त्यसै दिनदेखि भेदभावको सिकार बन्न सुरु गर्छे । विवाहपछि हिन्दू परम्पराअनुसार छोराछोरी जन्मन्छ, न्वारान, पास्नी, कन्यादान, चौरासी पूजा र मृत्य संस्कार इत्यादि वैदिक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिन थाहा हुन्छ कि मानिसले बनाएको जातपातका नाममा विभेद हुन्छ र भनिदो रहेछ कि तैंले पकाएको खाँदिनँ, तँ कुजात होस्, म उच्च जात, तँ निचो जात अनि उच्च जात भनौदोले आफ्नो घरमा पनि विभेद गरिरहेको हुन्छ र भन्छन्— तंैले पकाएको खाँदा हाम्रो धर्मले दिँदैन रे ।
जातको गणनाभन्दा माथि उठे सोच र आफ्नो कार्यशैली फेर्ने हो भने नेपाल समृद्ध बन्न केही समय पनि लाग्दैन । नेपालका शिक्षित व्यक्ति पनि जातजाति भन्नेबित्तिकै बोक्रे बोली बोल्छन् । भाषणमा एक र आफ्नो परिवारमा एक बोली गर्छन्, अनि महिलाले महिलाको समस्या बुझ्न नसक्ने यो समाजमा दिनानुदिन घट्नुपर्नेमा दिनानुदिन बढ्दै गरेको आभास भएको छ । आज बाहुनले रक्सी खाएर क्षेत्रीको बिँडो थामेका छन् भने क्षेत्रीले बरु बाहुनको पुँजा–विधि सम्हाल्न थालेका छन् । बाहुनले दिनभरि जजमानी गरेर राति भएपछि भट्टी पसेका प्रशस्त उदाहरण देखिन थालेको छ । सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिस भए पनि विश्वमा हिन्दू धर्म मान्ने देश २–४ वटा देशमात्रै रहेका छन् । जबसम्म जातजातिका नाममा द्वन्द्व र विभेद हुन्छ ती देशमा नयाँ विकास सिर्जना हुन सक्दैन ।
वैदिक विधि र शास्त्र विद्वान्का रूपमा बाहुनले मात्र मन्त्र पठ्ने भन्ने परिपाटी जबसम्म रहन्छ, तबसम्म समाज त के परिवार पनि सक्षम र शिक्षित र परिवर्तनशील बन्न सक्दैन । यसका लागि शिक्षित छोराछोरीले आफूभन्दा सिनियर जो हुनुहुन्छ उहाँसग समन्वय गर्नुपर्छ जब शिक्षित छोराछोरी नै अबुझ बन्यो भने त्यो परिवार र समाज सुध्रिन कहिल्यै सक्दैन
आजको २१ औं शताब्दीमा मानिसको जात भनेको महिला र पुरुष जात भएको र जुन छुवाछूत अहिले गरिन्छ त्यो कानुनविपरीत भएकाले नेपालको संविधानले कोही कसैलाई जातजातिको नाममा भेदभाव गर्न नपाइने, जातिको नाममा विभेद गरे मान हानि, गाली–बेइज्जतिको नामअन्तर्गत अदालतमा निवेदन गर्न सकिनेछ र दोषी ठहर भएमा अभियुक्तलाई तीन वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान छ, त्यसैले तपाईं हामी पनि यस्तो छुवाछूत, भेदभाव, अन्याय र अत्याचार, अपहेलित भएका छौं, भने आजै सचेत बनांै र अन्यायमा परेकाहरूलाई पनि सचेत बनाउन अनुरोध गर्छु ।